I-Duplex Unit C Elula Eduze nomfula iKenai - I-Airbnb
I-Duplex Unit C Elula Eduze nomfula iKenai
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Annette
Indawo encane ephelele endaweni enobungani bomndeni. Ikhilomitha elilodwa ukusuka emlonyeni womfula iKenai, izitolo zokudla kanye nezindawo zokudlela. Abanye baze bahambe nje ngokushesha. Ifakwe amakhethini amnyama, abalulekile ehlobo! I-WiFi ne-Netflix ifakiwe.
Lena iyunithi ye-duplex encane. Iyunithi engumakhelwane ingeye-Airbnb. Cishe i-500 sq ft enezindawo zokuhlala eziyisisekelo. Izivakashi ezingaphezu kwezi-2 zingahlala ngaphandle kwenkokhiso kodwa ngihlinzeka ngendawo yokuhlala yabantu abangu-2 kuphela. Ngiyazivumela izilwane ezifuywayo (ezingu-2 ubukhulu) kodwa ngikhokhisa imali yokuhlanza engu-$20 eyengeziwe futhi ngivumela kuphela izilwane ezifuywayo ukubhukha ngaphansi kweviki elilodwa.
I-HDTV engu-52" ene- I-Netflix, Fire TV
4.74 · 72 okushiwo abanye
Indawo ethokomele enezimbali eziningi nezihlahla zasendle. Kune-moose eyodwa ethanda ukuyizungeza ngezikhathi ezithile. Kuneplaza nje uhamba nje ekhoneni futhi igcwele izitolo zasendaweni kanye nekhofi.
Ngihlala edolobheni futhi ngizotholakala ngocingo cishe ngaso sonke isikhathi. Nginobungane kakhulu futhi anginankinga nokuhlangana noma ukuhlonipha ubumfihlo bakho.